गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा लोकतन्त्रलाई ठेस पुर्‍याउने काम भयो : देवेन्द्र पौडेल | ईमाउण्टेन समाचार
वैशाख २१, २०७८ पढ्न ६ मिनेट
काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य एवंम गण्डकी प्रदेश संयोजक देवेन्द्र पौड्यालले लुम्बिनी प्रदेशको घट्नाले संघीय व्यवस्थामाथिनै हमला भएको बताएका छन् ।
मंगलबार इमाउण्टेन अनलाइनसँग कुरा गर्दे उनले यस्तो बताएका हुन । लुम्बिनीमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमले मुलुकको संघीय ब्यवस्थामाथिनै हमला भएको र सरकार बहुदलीय जनबादको बाटोमा हिड्न चुकेको बताएका छन् ।
.लुम्बिनी प्रदेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ।
लुम्बिनीको पछिल्लो घट्नाले संमग्र नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको पार्टीको ठम्याई छ । संमग्रमा भन्ने हो भने संविधानको मूल मर्म विपरीत विधि विधान भन्दा विःल्कुन फरक ,नैतिकता विहीन र गैर राजनीतिक जिम्मेवारीको पराकाष्ठको एक उदाहरण यो घट्नाक्रमलाई मैले हेरेको छ ।
लोकतन्त्रमा यस्तो गर्न पाइन्छ त ?
लोकतन्त्रमा यस्तो गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानमा नभएको कुरालाई जवरजस्ती प्रयोग गर्न खोजियो र नेपालको राजनीतिमा मूलत गलत प्रणाली विकासको थालनी भयो । यस्तो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई मान्य हुने हुँदैन भन्न्ने मेरो बुझाई छ ।
के लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको घट्नाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिनै हमला भयो भन्ने तपाईको बुझाई हो ?
वास्तवमै त्यहिँ हो जे भएको छ र जे गरियो लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा त्यो एकदम लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिनै ठेस पुग्ने काम गरियो । यसले नेपालको समग्र कम्यूनिष्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्ने थालनी गरियो भन्ने मेरो बुझाई हो ।
प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने कुराको मूख्य दोष कस्लाई दिने त ? प्रदेशलाई दिने वा सिङ्गो सरकारलाई?
यो घट्ना केवल प्रदेशसंगमात्र सम्बन्धित छैन । समग्र नेपालको र सिङ्गो प्रदेशको घट्ना हो भनेर बुझनु पर्छ । त्यतिमात्र हैन यो नेपालको इतिहाँसमानै पहिलो र पदलोलुप घट्नाको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता घट्नाले नेपालको समग्र राजनीति प्रणालीमानै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
जनताको लामो संघर्ष पश्चात निर्माण भएको ब्यवस्थालाई ,राजनीतिका नाममा नेताहरुले जनतालाई धोका दिन मिल्छ ?
विल्कुल मिल्दैन , निष्ठाको राजनिती गर्छु भनेर जनताको अमूल्य मतदानबाट निर्वाचित भएर आएपछि जनताको सपनालाई निराश हुने काम गर्नु हुन्न भन्ने मेरो पनि मान्यता हो तर , विडम्बना भन्नु पर्छ जून उदेश्यकासाथ जनताले सरकारमा काम गर्न पठाएका थिए । विडम्बना त्यो हुन सकेन । सायद , मदन भण्डारी , मनमहोन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने आज यो अवस्था देख्नुपर्ने थिएन होला ।
राजनीति‐मा वर्गिकृतDevendrapoudel, NekapaMawobadiKendra
एमालेमा नेपाल पक्ष फ्लोरक्रस नगर्ने निष्कषर्मा, पार्टी मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रतिक्रान्तिकारी सोचसहित हमला भएको हाे : अध्यक्ष दाहाल
प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित
आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ